के धार्मिक विश्वासीहरू आदरको योग्य हुनुहुन्छ?
धर्म र आध्यात्मिकता अस्तित्व र अग्निष्टवाद
by अस्टिन कलाइन
धार्मिक विश्वासीहरूको आदर आदर
आज संसारको द्वन्द्वको बढ्दो स्रोत आदरको लागि धार्मिक विश्वासीहरूको मागको वरिपरि केन्द्रित छ। मुसलमानहरूले "आदर" भनेर आलोचना गर्छन् जुन आलोचना, सायद, वा तिनीहरूको धर्मको मजाकलाई मनाउँदैनन्। ईसाईहरूले "आदर" माग्दछन् जुन धेरै नै समान हुनेछ। गैर विश्वासकहरू एक बाँधमा पकडिएका हुन्छन् जब यो "सम्मान" को लागी बुझ्न सकिन्छ र कसरी प्राप्त हुनु पर्छ भनेर स्पष्ट छैन।
यदि विश्वासीहरूलाई आदर गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भने तिनीहरू तिनीहरूलाई के चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
सम्मान विरूद्ध सहनशीलता
कहिलेकाँही, आदर चाहन्छ जसले एक व्यक्तिलाई सहिष्णुताको लागि सोध्छ। सहिष्णुताको न्यूनतम परिभाषा एक राज्य हो जहाँ कसैलाई सताउन, असक्षम गर्ने, वा केही गर्न सजिलो छ तर सचेत छान्नु हुँदैन। यसकारण म कुत्तेको छालालाई सहन सक्छु भने मसँग यो रोक्न क्षमता छ। जब यो गैर-हिंसक हुन्छ, सहमतिवादी व्यवहार, धार्मिक विश्वासीहरूले सहिष्णुताको माग सामान्यतया उचित छ र दिइनेछ। यो दुर्लभ हो, यद्यपि, यो सबै चाहिएको छ।
सहनशीलताभन्दा बाहिर जाँदैछ
आदर र सहिष्णुता समिकरण होइनन्; सहिष्णुता अत्यन्त कम से कम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, जसमा आदरले केहि सक्रिय र सकारात्मक समावेश गर्दछ। तपाईं सहन सक्ने कुराको बारेमा धेरै नकारात्मक सोच्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं पनि सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ ठीक सटीक बारेमा बारेमा नकारात्मक सोच को बारेमा केहि विरोधाभासी छ।
यसकारण, कम से कम, आदर को लागी यो धर्ममा आउँदा सकारात्मक विचार, छाप, वा भावनाहरू चाहिन्छ। यो सँधै उचित छैन।
विश्वासको आदर गर्नुपर्छ?
त्यहाँ एक लोकप्रिय धारणा हुन सक्छ कि विश्वासहरू स्वतन्त्र सम्मानको योग्य छन्, र त्यसैले धार्मिक विश्वासहरू सम्मान गर्नुपर्छ।
किन? के हामीले नस्लवाद वा नाजियतको आदर गर्नुपर्छ? अवश्य होइन। विश्वासहरू स्वतन्त्र आदर योग्य छैन किनभने केही विश्वासहरू अनैतिक, दुष्ट, वा केवल सादा बेवकूफ हुन्। विश्वास व्यक्तिको आदर कमाउन सक्षम हुन सक्छ, तर यो नैतिक विश्वास र इमान्दार जिम्मेवारीको एक खारेज स्वचालित रूपमा सबै विश्वासहरूको एउटै सम्मानलाई सम्झौता गर्न।
के विश्वास गर्ने अधिकारको आदर गर्नुपर्छ?
केवल किनकी एक विश्वास अनैतिक वा बेवकूफ हो मतलब छैन कि विश्वास गर्न को लागि कुनै अधिकार छैन। विश्वास अयोग्य वा अपमानजनक हुन सक्छ, तर विश्वासको अधिकारले यस्ता विश्वासहरूलाई आवरण गर्नु पर्छ यदि सबैसँग कुनै अर्थ छैन भने। त्यसकारण, व्यक्तिलाई चीजहरू विश्वास गर्न र तिनीहरूको धार्मिक विश्वास गर्न अधिकारको आदर गर्नु पर्छ। तथापि, एक विश्वास को अधिकार हुनु त्यहि विश्वास हो कि त्यो विश्वासको आलोचना सुन्न अधिकार छैन। आलोचना गर्ने अधिकारलाई विश्वासको अधिकारको रूपमा एउटै आधार छ।
विश्वासीहरूको आदर गर्नुपर्छ?
यद्यपि विश्वासहरूले आदर कमाउनु पर्छ र स्वतन्त्र आदर प्राप्त गर्नुपर्दैन, त्यस्ता मानिसहरूको पनि सत्य होइन। हरेक मानवलाई केही आधारभूत न्यूनतम सम्मानको सुरुवातको हक मानिन्छ, चाहे उनीहरूले विश्वास गरे तापनि। तिनीहरूको कार्यहरू र विश्वासहरूले समयको साथमा धेरै आदर गर्दछन्, वा उनीहरूले त्यो न्यूनतम बनाए राख्ने क्षमतालाई रोक्न सक्छन्।
एक व्यक्ति त्यस्ता व्यक्ति होइन जसलाई त्यो व्यक्तिले विश्वास गर्दछ; एक को लागि सम्मान वा कमी यसको लागि अरुको लागि सही नेतृत्व गर्न हुँदैन।
सम्मान विरूद्ध प्राथमिकता
आफ्नो धर्म र / वा धार्मिक विश्वासको आदरको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको "आदर" पनि प्रायः "डेरिभेटिभ" हुन्छ। "धर्म वा धार्मिक विश्वासहरूलाई स्थगित भनेको उनीहरूको विशेषाधिकारको स्थिति हो - केही विश्वासीहरूको लागि बुझ्न योग्य छ, तर कुनै कुरा जो अविश्वासीहरूले माग्न सक्दैनन्। धार्मिक धारणाहरू अरू कुनै पनि दावी भन्दा बढी डेरिभेटिभ योग्य र धर्महरूले गैर विश्वासकर्मीहरूबाट विभेदको योग्यता गर्दैनन्।
कसरी धर्म सकिन्छ र सम्मानित हुनुपर्छ
धार्मिक विश्वासीहरु बाट तेजी देखि कडा मांग छ कि उनको धर्महरुलाई सार्वजनिक वर्ग मा अधिक "सम्मान" मानिन्छ र गैर पक्षियहरुको एक संकेत हो कि केहि गम्भीर गल्ती छ - तर के हो, वास्तव मा?
विश्वासीहरू स्पष्ट रूपमा महसुस गर्छन् कि उनीहरूलाई असाध्यै र महत्त्वपूर्ण रूपमा अपमानित भइरहेको छ, तर के यो सत्य हो, वा के हो भने एक आपसी द्विवास्तविक गलतफ्लुको बारेमा? यो हुन सक्छ कि दुबै समयमा विभिन्न समयमा आउँदैछ, तर हामी हाम्रो टर्मिनलोजीको बारेमा स्पष्ट नभएसम्म समस्याको रूटमा पुग्न सक्नेछैनौं - र यसको मतलब यो हो कि धार्मिक विश्वासीहरूले यसलाई कस्तो प्रकारको "आदर" स्पष्ट पार्नु हुन्छ ।
धेरै उदाहरणहरूमा, हामी फेला परेका छौं कि धार्मिक विश्वासीहरू उपयुक्त कुराको लागि सोध्दैनन् - उनीहरूले आफ्नो लागि विश्वास, सकारात्मक विचार र विशेषाधिकार माग्दै छन्, उनीहरूको विश्वास र तिनीहरूको धर्म। बिस्तारै, कहिलेकाहीँ, यस्ता चीजहरू उचित छन्। अन्य उदाहरणहरूमा, हामी पाउन सक्छौं कि उनीहरूलाई आधारभूत सहिष्णुता र आदर मान्न सकिँदैन जुन तिनीहरू मानवको रूपमा योग्य छन्, र तिनीहरू बोल्ने कुरामा उचित छन्।
धर्म, धार्मिक विश्वास र धार्मिक विश्वासीहरूको आदर गर्नुपर्दछ र उनीहरूले बाल दस्तानेसँग व्यवहार गर्न सक्दैनन्। यदि विश्वासीहरूले आदर गर्दछन्, त्यसपछि तिनीहरू वयस्कहरूको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ जुन जिम्मेवार र दोषी छन् उनीहरूले के गर्छन् भनेर - अझ राम्रो र खराबका लागि। यो अर्थ हो कि उनको दावी गंभीर प्रतिक्रियाहरु र critiques संग आलोचना गर्नु पर्छ यदि आलोचना warranted छ। यदि विश्वासीहरू आफ्नो स्थिति एक तर्कसंगत, सहज तरिकामा प्रस्तुत गर्न इच्छुक छन्, त्यसपछि तिनीहरू एक तर्कसंगत र सहज प्रतिक्रियाको योग्य - सहित महत्वपूर्ण जवाफहरू सहित। यदि तिनीहरूले अनिवार्य छन् वा आफ्नो तर्कलाई तर्कसंगत र सुसंगत ढंगमा प्रस्तुत गर्न असक्षम छन्, त्यसपछि उनीहरूले केही पछि लाग्ने निर्णयको साथ खारेज गर्नुपर्ने आशा गर्नुपर्दछ।
विज्ञान र वैज्ञानिक अनुसन्धान किन धर्म होइन?
बुलु चाबटन: म्यान ईश्वर को युद्ध
लिबरल एथाइस्ट्स बनाम कन्वर्वर्वेटिस्ट क्रिश्चियन
कमजोर अस्थिरता को परिभाषा
सुसमाचार क्लब वी। मिलफोर्ड सेन्ट्रल विद्यालय (1 99 3)
मिथक: उत्थानले ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे व्याख्या गर्न सक्दैन
समाजको जीवनी प्रोफाइल
के तपाईंले आफ्नो पाहुनालाई परिवार, आमाबाबुलाई प्रकट गर्नुहुन्छ?
फ्रिड्रिड नितजेश जीवनी
गोपनीयताको स्थितिहरूको सहीमा उच्च न्यायालय निर्णय
सामथ्यवाद 101: अस्तित्व र अस्तित्वको परिचय
कंटेनिंग बनाम आवश्यक सत्य
खानाको लागि सरल रासायनिक परीक्षण
रेखा वस्तु Veto: किन राष्ट्रपतिहरू अझै यो गर्न सक्दैनन्
सागर Urchins: विषम, तर धेरै धेरै खतरनाक
पैराग्राम (शब्द खेल)
वृषभ ऊर्जा र अवसाद
रिक र मोर कास्ट र गेस्ट ताराहरु
आत्मनिर्भरता निर्माण गर्नुहोस्
टाइटल-फ्रान्टी रणनीति बुझ्ने
Illuminati साजिश के हो?
छोटो खेलमा उत्कृष्ट निर्देशन पुस्तकहरू
तपाईंको छनौटको विषय: आम आवेदन निबंध विकल्प #7को लागि सुझाव
विद्यालयमा विद्यार्थी डेभलपमेन्ट मनाउने मजाक तरिका
50 परिवार सम्बन्धी सम्बन्धको सम्बन्ध सम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्
6 तर्कहरूको अध्ययन गर्ने राम्रो कारणहरू
हल्क होगन बनाम आन्ड्रे द विशाल
फिली स्पोर्ट्स फ्यान्सको लागि उपहार: पौष्टिक स्तम्भकार बिल लियोन हो
हॉलमार्क, द क्रिसमस आभूषण कम्पनी
मध्यकालीन अफ्रीकामा विभाजन
प्रोटीन को प्रकार्य र संरचना
सामग्री विकासका लागि विकासशील पढाइको लागि पढाउने पढाइको कुशलता
कसरी HUD विरोधी फ्लिपिङ नियम होमब्युटरहरूको सुरक्षा गर्दछ
पल फिक्शन मूवी उद्धरण
जर्मनमा कसरी 'तय गर्न' एक्सप्रेस गर्ने
वाद्ययन्त्र चरमा बहिष्कार प्रतिबन्धको महत्त्व